Free Video Players maka FLV File Format
Free Video Player maka FLV File Format
Kemgbe discontinued nkwado nke Flash site Adobe, ọrụ e nwere ihu ọma hapụrụ ha ngwaọrụ. Ụfọdụ bụ ike anya n'ihi na uzo ozo ebe ndị fọdụrụ dị nnọọ steered onwe ha kwupụta ndị ọzọ faịlụ formats. O sina dị, ọ ga-adị ndị ọzọ bara uru na-adaba adaba ma ọ bụrụ na ị nwere video ọkpụkpọ na-akwado playback nke FLV video faịlụ. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ a nnọọ nkịtị faịlụ ụdị, karịsịa na faịlụ ebudatara. Ma, i nwekwara ike wụnye mkpa nkwụnye na / tinye-on / codec ikwado FLV faịlụ si playback. Ndị ọzọ viable nhọrọ na-agụnye converting gị FLV faịlụ na kacha video Ntụgharị tupu playback na a video ọkpụkpọ nke mmasị gị.
Atụ aro FLV Video Players
Wimpy Desktọpụ FLV Player
Ukwuu configurable ọkpụkpọ na kwukwara ngwaọrụ
Ikwunye-na maka WordPress
Wuru na-AJAX ike
Download ya ebe a
Akpaka sobtaitel nlaghachie
Dị iche iche playback ụdịdị
Akwado uncompressed faịlụ dị ka DivX, MKV, AVI, MTS na wdg
N'ụzọ kwụ ọtọ na mfe na-eji
Adịghị achọ ọzọ codec
Playback ọzọ formats dị ka MOV, MP4, 3GP, M4A, M4V na wdg
RealPlayer Ígwé ojii
Voice iwu ka video search na ibe edokọbara nhọrọ
Files shareable na-elekọta mmadụ na saịtị
Upgradable atụmatụ site ugwo ndenye aha
Na-akwado na-ewu ewu formats dị ka AVI, MP4, MKV, MOV na wdg
Elu atụmatụ dị ka audio / ihuenyo kpọọ, mmetụta na wdg
Skinnable interface na Ọtụtụ atụmatụ wuru na-
YouTube search na-edekọ
N'ime 270 wuru na-codec na playback fọrọ nke nta niile media faịlụ, DVD yana idobe okirikiri
Playback a dịgasị iche iche nke mgbasa ozi faịlụ, DVD yana idobe okirikiri
Na-akwado multi-track ndepụta okwu
Ntọala ọzọ maka ukpụhọde on akụkụ ruru, audio, nchapụta na wdg
Ad-free na bookmarking mma
Na-akwado fọrọ nke nta niile video formats, DVD yana idobe okirikiri
Mirror ọdịnaya n'elu na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka PC, TV na wdg
Adịghị achọ ọzọ codec echichi
Na-akwado ndị ọzọ video formats dị ka MPEG4, XviD, RMVB, M2T na wdg
Ihuenyo captures echekwa n'ime image faịlụ
Ikwunye-ins / Tinye-ons & Codec
The FFDShow-arụ ọrụ na kasị mpụga ma ọ bụ 3rd otu video egwuregwu. Ọ bụ onye dị elu codec nkwado maka nnukwu ndepụta nke ọdịyo na video faịlụ formats. Ọ na-na-onwem na ịnara nhazi nzacha na na-dynamicalled mbughari nakwa dị ka kwukwara.
Mụta ihe banyere ya
FLV Codec ngwa mgbakwunye
The FLV Codec ngwa mgbakwunye bụ nanị dakọtara maka Windows Media Player. Ọ bụ ihe echichi ngwugwu na FLV codec na-enyere gị Windows Media Player ka playback FLV mgbasa ozi faịlụ. Ọ ga-esetịpụrụ gị Windows Media Player dị ka ndabere video ọkpụkpọ n'elu nwụnye nke FLV Codec ngwa mgbakwunye.
Windows dị mkpa Codec Pack (WECP)
A Media Player Omuma a gụnyere na echichi nke Windows dị mkpa Codec Pack (WECP). Ọ bụ na-dakọtara na ndị ọzọ mpụga ma ọ bụ 3rd otu video egwuregwu. The WECP bụ ihu ọma a collection nke mgbasa ozi codec na ndị ọzọ na mkpa ngwaọrụ nke ga-ekwe ka ị na a nso 100% playback gị niile ebudatara online videos.
N'elu nke àjà ihe ọṅụṅụ-ngwa-ngwa akakabarede ọsọ, na Video Converter Ultimate nakwa awade a dịgasị iche iche nke kachasị video ntọala maka converted faịlụ. Ọ bụ na-akwado nke a dịgasị iche iche nke ọsọ ọsọ na mmepụta faịlụ formats. E wezụga nke ahụ, ị nwere ike idezi gị video faịlụ dị ka Windows Movie Onye kere. Ị ga-enwe ike ime ka ojiji nke ya ọzọ atụmatụ iji budata ọkacha mmasị gị online videos si YouTubeor ọ bụla ọzọ na-ewu ewu online video saịtị.
Olee otú Tinye iTunes Movie Metadata (AVI, MP4, MOV, MKV, wdg)
Olee otú Mepụta a Tilt-Mgbanwe Mmetụta na a Click
Best Movie Downloader: Download Your Favorite Movies na a Click
Olee otú Play MOD Files
Olee otú iji tọghata MXF ka MOV (QuickTime) ọsọ ọsọ na mfe
6 egwu ụzọ na-egwu XviD Movies na vidiyo na XviD Video Player
> Resource> Video> Free Video Players maka FLV File Format